Ciidamada Jubbaland oo dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandCiidamada Jubbaland oo dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab
January 24, 2017 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Ciidamada Jubbaland oo dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo ay taageerayaan ciidamada Kenya oo hoos taga howlgalka AMISOM ayaa maanta oo Talaado ah dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu sheegay wasiir.
Cabdirashiid Xasan Nuur, oo ah wasiirka amniga Jubbaland ayaa laanta Af-Soomaaliga BBC u sheegay in ciidamada huwanta ah ay gacan buuxda ku dhigeen degmada ayna dileen dhowr maleeshiyo oo Al-Shabaab ah.
“Ciidamadayada iyo kuwa AMISOM ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay degmada Badhaadhe, waxaanu dilnay argagixiso badan,” ayuu Cabdirashiid u sheegay BBC Soomaali.
Badhaadhe waxay qiyaastii 180 km u jirtaa magaalada Kismaayo, degmada ayaa gacanta u gashay Al-Shabaab 26-dii Janaayo sanadkii lasoo dhaafay ee 2016-ka.
Al-Shabaab ayaa banaanka looga saaray magaalada Kismaayo bartamihii 2012-kii, balse wali waxa ay joogaan deegaano balaaran oo kuyaala gobolada Jubbooyinka.
December 24, 2016 Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada Jubbaland
Farmaajo and Afwerki sign agreement pledging to establish diplomatic relations
Asmara-(Puntland Mirror) Somalia President Mohamed Abdullahi Farmaajo and his Eritrean counterpart Isaias Afwerki have signed an agreement in Asmara on Monday. The agreement consists of four major points: 1. Somalia is endowed with a strategic location [...]